Iincwadi ezili-10, ezinabalinganiswa abadala, ekufanele ukuba uzifunde. | Uncwadi lwangoku
Abalinganiswa abadala bagqobhoza kuncwadi oluncinci, kodwa xa bekwenza oko ngayo yonke imbeko.
Abo bakhethiweyo njengabakhokelwayo abaphambili beenoveli abadli ngokuba ngabantu abadala. Endaweni yoko, uncwadi lusishiya nemizekelo emihle yazo zonke iintlobo zohlobo abalinganiswa abadala bayasebenza kwaye bayenza kakuhle kakhulu.
Yiyo Uluhlu olujolise ekuchukumiseni konke ukuthanda kunye nezitayile, ukusuka kuburharha ukuya kubunyani bobugqwirha ngokubaliswa okumangalisayo okanye inoveli yeqhinga. Iindidi ezahlukileyo, amaxesha ahlukeneyoBanento efanayo kuphela yokuba yimisebenzi emikhulu eneenkwenkwezi kubantu abadala. Umntu ngamnye makazikhethele eyakhe.
1 Utatomkhulu oPhume kwiWindows kwaye wabaleka, nguJonas Jonasson.
2 Ufuna ukhokho ukuba abelane ngeflethi, nguVincent pichon-Varin.
3 UClara kunye noMakhulu kaKangaroo, nguTania Krätschmar.
4 Himmler's Cook, nguFranz-Olivier Giesbert.
5 Incwadana kaNowa kaNicholas Sparks.
6 Oomakhulu abathathu kunye noMpheki oFileyo, nguMinna Lindgren.
7 Uthando ngamaxesha omsindo, nguGabriel García Marquez.
8 Ukufa eVicarage, nguAgatha Christie.
9 Ityala elinomdla kwiButton Button, nguFrancis Scott Key Fitzgerald.
10 UkuHamba ngokungaqhelekanga kukaHarold Fry, nguRachel Joyce.
Utatomkhulu oPhume kwiWindows kwaye wabaleka, nguJonas Jonasson.
Indoda ibaleka kwikhaya lokunyamekela ngomhla we-100 wokuzalwa. Ngetyesi enesaphuli-mthetho kwaye enye yezigebenga zakhe ifile, uya kuqala ukubaleka okuhlekisayo kunye neenkumbulo ezilahlekisayo zobomi bakhe, ukusuka kwindlela yakhe yokudlula eSiberia ukuya kwintlanganiso yakhe noMao Tsé Tung, edlula ukuwela iTibet ngeenyawo okanye ukunxibelelana kwakhe nolawulo lwamaNazi. Imbali yekhulu lama-XNUMX - ophambili yesibini kule noveli. Abalinganiswa abaliqela bajoyine indlela yakhe yokubaleka, kubandakanya indlovu ebaleke esekisini. Inoveli ebalulekileyo kwinkulungwane ende yasemva kwemini yokuhlekisa kunye ne-satire.
Ufuna ukhokho ukuba abelane ngeflethi, nguVincent pichon-Varin.
Inoveli ekhanyayo yeemvakalelo, yedrama kwaye emnandi ekhuthaza umfundi ukuba abonwabele ubomi kude kube ngumzuzu wokugqibela. Abahlobo abathandathu abaphakathi kweminyaka engama-60 nama-85 babelana ngeflethi eParis, benza imithambo yonke imihla kwaye bahlala nobuntu babo kunye nezifo zempilo. UJean ungumnini we-cabaret yokugqibela ye-queen cabaret eMontmartre; UKathy ongumdlali weqonga ngaphandle kobutyebi obuninzi; UMonica, owayesakuba ngumthengisi wentengiso ka-Bon Marché wajika waba ngumbhengezi wasebumelwaneni; Paul, owayekwangumcuphi kwiHotel Lutetia yasentsomini; UBlanche umbhali, ochitha iintsuku zakhe efunda abapapashi abohlukeneyo kunye noHonorine, ikrelemudgeon endala. Xa befumanisa ukuba bazama ukukhwabanisa uJean ukuba ajike i-cabaret yakhe ibe yihotele yokunethezeka, bathatha inxaxheba kwi-adventure ehamba phambili apho anendawo Uburharha kunye nosizi.
UClara kunye noMakhulu kaKangaroo, nguTania Krätschmar.
UClara, ephefumlelwe ngamandla kamama wakhe, uthatha isigqibo sokunyuka Iarhente yokugcina abantwana yabasetyhini ngaphezulu kweminyaka engama-50Amava abo anokuba luncedo kwiintsapho ezininzi. Abagqatswa abathathu bokuqala baya kuchitha iinyanga ezintathu EBerlin Ukugcina abantwana beentsapho ezintathu, amava azakutshintsha ubomi babo.
Inoveli emnandi kwaye elula Ingena kwisifo se-nest esingenanto kunye nokukwazi ukuzihlaziya kwabafazi abazinikele kusapho xa abantwana babo bengasabadingi.
Himmler's Cook, nguFranz-Olivier Giesbert.
Lo Ibali lisibalisela ngobomi obungqwabalala nobukhohlakeleyo bukaRose, umfazi onemvelaphi yaseArmenian malunga nokujika ikhulu leminyaka ubudala kwaye uyenza nge ukuchukumisa uburharha isongelwe kumnqweno ophambili wokuziphindezela owenza ukuba umfundi aphume kwenye imvakalelo aye kwenye ngokungathi ukwi-merry-go-round.
Umpheki kaHimmler uhlala ekubhujisweni kweArmenian eTurkey, kulawulo lwamaNazi ngaphakathi nakwabanye abaninzi amaxesha abalulekileyo kwimbali yaseYurophu kwinkulungwane yama-XNUMX.
Ingqondo yokuhlekisa, umnqweno wesini kunye nomnqweno wokuziphindezela ugcina eli xhegwazana lingalibaleki osele wehlile kwimbali yoncwadi njengomntu obalaseleyo.
Abalinganiswa abadala babelana ngeenkumbulo zabo zembali yenkulungwane ephelileyo.
Incwadana kaNowa kaNicholas Sparks.
UNowa yindoda endala eza kuhlala kutyelelo lweqabane lakhe uAllie. Yonke imihla umfundela incwadi enye, ebalisa ibali loMzantsi, uNowa ngokwakhe, obuya kwiMfazwe yesibini (II) yeHlabathi ngenkumbulo yothando lwasehlotyeni. Isithunzi esimphetheyo nguAllie, angambonanga kangangeminyaka eli-14. Ukudibana kwakhona kukhupha umhlaba wothando, ukunyaniseka kunye neenzima phakathi kwaba bafana babini. Emva ekhaya, sifumanisa ukuba UAllie unengxaki Alzheimer kwaye UNowa uyamfunda, yonke imihla, ibali lothando lwakhe.
Oomakhulu abathathu kunye noMpheki oFileyo, nguMinna Lindgren.
Ufakelo lokuqala lwefayile ye- "IHelsinki Trilogy", Yiyo inoveli ehlekisayo Ukujongana neqela labantu abangaziwayo.
USiiri, u-Irma kunye no-Anna-Liisa ngabahlolokazi abathathu abanamashumi alithoba ubudala abahlala kwihlathi langokuhlwa, indawo yokuhlala yabucala yabantu abadala IHelsinki. Indawo yokuhlala yindawo embi apho abantu abadala bahluthwa isazisi, bengqongwe yonke imihla ngabongikazi abonqenayo nabangenamava.
Ukubulala okungummangaliso kuyaqala ukwenzeka kwindawo yokuhlala...
Olu trilogy lwe iyelenqe kunye noburharha iyaqhubeka nooMakhulu abathathu kunye noTyelelo olujikelezayo kunye noMakhulu abathathu kunye neSicwangciso seSabotage.
Uthando ngamaxesha omsindo, nguGabriel García Marquez.
UFlorentino Ariza noFermina Daza inkwenkwezi kwi ibali elinothando lowo akazi iminyaka nokufa. Kwilizwe eliphenjelelwa ngumsindo, septuagenarians ezimbini baya kudibana kwakhona emva kokuhlala amawaka amabali namava.
Ukufa eVicarage, nguAgatha Christie.
Umdlalo wokuqala apho kuvela khona uMiss Marple, ngo-1930, umcuphi owayeselekhulile owaziwayo kwiNenekazi Elikhulu Lolwaphulo-mthetho.
El UColonel Lucius Protheroe unayo Ubuntu obuzothe, kangangokuba uye wakwazi ukukhupha la mazwi alandelayo kumfundisi: "Othe wabulala uColonel Protheroe uyakuba enika inkonzo kwihlabathi." IProtheroe yiyo wabulawa endlwini kamfundisi kwaye, xa oku kusenzeka, uNkosazana Marple uqala ukuphanda.
Ityala elinomdla kwiButton Button, nguFrancis Scott Key Fitzgerald.
Indoda ezelwe indala kwaye, njengoko iminyaka ihamba, ubuya ebutsheni bakhe, ukuvumela ukuba ubone uluntu kunye nabantu abakungqongileyo ngokwembono eyahlukileyo. Yapapashwa okokuqala ngo-1922.
Ngo-2008 yathathwa yaya kwi-cinema, kwenye yeefilimu ezaziwayo kule nkulungwane.
UkuHamba ngokungaqhelekanga kukaHarold Fry, nguRachel Joyce.
Indoda eneminyaka engama-65 ubudala, emva kokuthatha umhlalaphantsi, imka ekhaya iye kubhala ileta. Uthatha isigqibo sokuqhubeka nokuya kwelinye icala laseNgilani ukuya kukhuthaza isigulana somhlaza. Ukulimala kwakhe kuya kuhamba naye kuhambo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Iincwadi ezili-10, ezinabalinganiswa abadala, ekufanele ukuba uzifunde.